Uhlobo lomdlavuza wesifo somhlaza: Unengqondo kwaye uyathandana - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Uhlobo lomdlavuza wesifo somhlaza: Unengqondo kwaye uyathandana
Uninzi lwabantu bacinga ukuba iiCancer ziluhlobo lwabantu abangazenzi ngothando okanye basondele kakhulu kwabesini esahlukileyo, kuba baneentloni kwaye abazithembanga.
Ewe, akuyonyani konke konke, kuba, ngelixa banokukhetha ukusondela endaweni yokuthatha inyathelo lokuqala, ukuba izinto zimile ixesha elide, baya kuhlasela ngaphandle kwengcinga yesibini.
Iimpawu Umhlaza udlala ngothando
Unesisa ❤ Baza kutyala lonke ixesha kunye nomzamo wabo.
Ndineentloni ❤ Kukho umda wobumnandi kunye nobumsulwa kuzo.
Ithemba ❤ Iglasi iya kuhlala izele sisiqingatha kubo.
Ukunyamekela ❤ Baya kuncoma kwaye bafune okufanayo.
I-Nostalgic ❤ Ixesha labo elidlulileyo liyinxalenye yomdlalo.
Xa uMhlaza unqwenela ukuthandana nawe, baya kuqala ukubuza imibuzo eqhelekileyo, ukuze babone ukuba yintoni kanye kanye le uyifunayo, uyibona njani isuka apho, kwaye yintoni enokwenziwa ukugcina umdla uphila. Zintle ngokwenene ngale ndlela, nangona zisenokufuna ukubonakala njengendoda nolawulo.
ngowuphi umqondiso okhoyo nge-24
Aba bantu baya kufuna ukuzonwabisa ngokupheleleyo kwiimvakalelo zothando olunzulu nothando, kwaye oko kuthetha ukuba amaqabane abo aya kunikwa ingqalelo, ukunconywa kunye nokuthantamisa kwabo okungunaphakade.
Indlela uCancer aqhuqhala ngayo, yenye yezona zinto zinelisayo nezonwabisayo ezakha zakho, kuba isimo sabo sengqondo sichaza ukuba omnye umntu kukujolisa kwabo kuphela, ayikho enye into.
Kunjengokuba yayingabo kuphela abantu abaseleyo bephila, ngomhla wothando. Ekuqaleni, bafuna ukwazi ukuba uyabaphindisela kwiimvakalelo zabo zokuqala kwaye bafuna into engaphezulu nje kwento eyonwabisayo, ngaphambi kokuqhubela phambili kuhlaselo. Kuya kubakho uncumo oluninzi, ukuhleka, ukuchukumisa kunye noqhwithela lweemvakalelo zokuphazamisa nayiphi na imiqobo eyahlukileyo.
Baneentloni kancinci, kwaye baya kuzivumela bathande ngokukhululekileyo xa uzibonakalisa unomdla kubo.
Ukuba lo mgama uweliswe liqabane, emva koko abayi kuba nanto yimbi bayoyikisa okanye babe nexhala. Enye yeendlela ababonisa ngazo uthando lwabo kunye nomnqweno wabo wokwakha into engaphaya komhla othile kukuzama ukukhathalela abantu ababathandayo.
Ukubazisela isidlo sasemini eofisini, ukubatsalela umnxeba nokubabuza ukuba baqhuba njani, kwaye ukuba bayisusile loo ngqele imbi, babasa emotweni ngemini enethayo, njl. izakuba yindawo ehlekisayo kunye neyonwabisayo xa ujikeleze aba bafana, kuba liqela elihlekisayo.
Ayothusi into yokuba iiCancer ezinqabileyo, ngokubanzi, zingathandi ukuya kwiminyhadala yentlalo, kwaye ukungeniswa kufana nekomityi yabo yeti ixesha elininzi.
Ngokuqinisekileyo, oko akuthethi ukuba abayi kukulungela ukuyishiya ngasemva kwaye bonwabele ixesha abalichitha nomntu omthandayo. Mhlawumbi yeyona nto inokubenza bathande nokuphuma bangene emhlabeni kwaye baphume kwindawo yabo yabucala.
Kwaye unokuqiniseka ukuba xa uMhlaza eza kunika intuthuzelo kunye nokuthula ukuze abe nawe, asikho esinye isizathu ngaphandle kokuba bathandana kakhulu nawe. Kukulalanisa abakulungele ngakumbi ukukwenza.
Ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-zodiac uphawu lokuhambelana
Umhlaza udlala ngomzimba
Ngomhlaza, ngekhe kubekho sidingo sokutolika kunye nokusongela ubuchopho bakho malunga neenjongo zabo, kuba baya kucaca njengamanzi ngayo yonke into.
Baya kubamba amaqabane abo ngokungapheliyo, kwaye baya kufuna ukuhlala kwi-embrace yabo ngonaphakade, ngoko ke, kuba abayi kuthandabuza ukucela oko.
Ngapha koko, kukho amehlo, konke okubandakanya kunye nothando lomhlaza olulandelayo naphi na apho uya khona.
Xa aba bemi bemi bevale amehlo kunye neqabane labo, kuya kuphelela kwiseshoni yokumanga kunye nokumanzi okumanzi, okanye bobabini baya kuvuswa kakhulu ngenxa yoko.
Kuza kuba nzima kubo ekuqaleni, ngenxa yazo zonke iimvakalelo ezingafunekiyo nezibi ezibangela i-ruckus apho phezulu. Ukufumana ukuxhonywa kwemeko kunye nokulawula ngokupheleleyo ezo mvakalelo kuya kuba ngumceli mngeni, kodwa banokubakhulula bonke, ukuba iqabane libonakala lifana ngale ndlela.
Nangona kunjalo, akukaze kube lula ukufumanisa ukuba umntu uyakuthanda, kunokuba ujonge indlela iCancer eziphatha ngayo. Ukuba kukho into kweli hlabathi abayinqwenela ngokunzulu, yayikukufumana uthando lokwenene, umntu ababeza kuchitha lonke ixesha labo, bewolana ngokuqinileyo, kwaye bewolana kunye.
Ungadlala njani ngomhlaza
Ayizukuba yeyona nto ilula emhlabeni ukwenza ukuba umhlaza uqaphele inkqubela yakho kwaye ufunde ukuyibuyisela. Ukuba ufuna ukuyenza loo nto, lixesha lokuba ulisebenzise lonke ixesha olichithileyo ucinga ngazo zonke iindlela zothando onqwenela ukuba iqabane lakho likwenzele lona, ​​kuba eli lelona xesha lokuzisebenzisa.
Aba bantu bathandana ngokugqithileyo, bayathandeka, kwaye banovelwano, kwaye abasayi kuthanda nto ngaphandle kokuphathwa nokunyanyekelwa ngumntu obathandayo.
Ekuqaleni, izinto ziya kuqhubeka kancinci kancinci, kuba baya kufuna ukugcina iinjongo zakho ngaphambi kokuzibophelela kuyo nantoni na.
Ukubakhupha kumsitho ongathandekiyo kwezentlalo kuya kuba litikiti lakho lokuphumelela naba bantu, kuba abayithandi kwaphela ingxwabangxwaba kunye ne-ruckus kwezi ndawo zixineneyo.
Ayisiyonto abayidele ngokupheleleyo, kodwa banokukhetha ukuba kunye nomntu osondeleyo, kwiqela elincinci, kunabantu abaninzi.
Ke bamba isandla sabo ubakhuphele ngaphandle, kude nelaa dolophu yeqela elinamandla amakhulu, kwaye uyakuqinisekiswa ukuba uphuze, okanye ubuncinci ufumane inombolo yabo yefowuni. Qaphela ukuba ungophuli mida kwaye ungene kwindawo yabo yabucala, kuba abayikukuthatha ngobubele kuloo nto.
Umhlaza udlala ngothando
Amadoda omhlaza akhuselekile kwaye anezinto abanomdla kuzo, kwaye hayi ngendlela ebaxiweyo, kodwa ngendlela entle nothando.
Oko kukuthi, xa nibabini nidibene, abasayi kuze basuse namehlo abo kuwe, nditsho nokubukela iimoto ezizayo ekugcwala kwabantu.
venus kwindlu ye-9
Kufana nje nokuzikhusela okugqithisileyo kwaye ujonge iingozi ezinokuthi zehle kubathandi babo. Kwaye ngaphezulu koko, bayithanda kakhulu, ilula njengaleyo.
Bathanda ukujonga amaqabane abo, ukuziva besondele, kwaye besazi ukuba baya kuhlala bekhona, ubomi babo bonke.
i-virgo ngenyanga nge-horoscope septemba 2015
Umhlaza womfazi udlala ngothando
Njengendlela yokujonga ukuba yeyiphi enye into, abantu besifo somhlaza baya kukhetha ukuba neengxoxo ezingaqhelekanga neziqhelekileyo, apho banokufumana khona izinto ezininzi kangangoko malunga nendlela omnye acinga ngayo, nangeminqweno namaphupha akhe.
Yindlela yokuphepha ukuchitha ixesha nabantu abangahambelaniyo, ayikho enye into. Kananjalo, abayi kufumana yonke into yothando kunye ne-lovey-dovey ngokuza okokuqala.
Bazakufuna kuqala bazi ukuba bajongana nabani, phambi kokukhupha ezo zikhubalo zabo zobufazi. Ukuba akukho themba lekamva kunye, ke eyona nto bazakuyenza kukwenza iziqhulo ezimbalwa, kwaye benze indlela ebheke ekuphumeni ngokukhawuleza.
Ungawutsala njani uMfazi onomhlaza: Iingcebiso eziPhambili zokuMenza awele Ethandweni
Izinto eziphambili ezili-10 zokwazi ngaphambi kokuthandana nomhlaza
Indoda yaseGemini kunye noMfazi weVirgo ukuhambelana kwexesha elide
yintoni i-zodiac yamaTshayina yango-1972
pluto kwindlu yesithandathu
Inyanga yeScorpio nenyanga yomhlaza
Luthini uphawu lwe-zodiac lwango-Okthobha we-16
Wazalwa ngo-1961 i-zodiac yamaTshayina
unyaka wenyoka 1977